Ungayibulala njani intsholongwane yokuBhoboza amaBele-Thatha la macebiso | IBezzia
Ngaba uyayazi indlela yokubulala iintsholongwane ekubhobozeni inkaba? Kuba lelinye lawona mathandabuzo asibethayo xa sisenza umngxunya emzimbeni nangaphezulu, kwenye efana nenkaba, ukuba ukungcola okwaneleyo kuqokelela nokuba asifuni. Ke, namhlanje uza kuphuma kuwo onke amathandabuzo anokubakho.
Ukuze siyibonise, kufuneka sihlale silandela uthotho lweengcebiso. Zonke ziya kuthintela usulelo ekusasazeni kwaye zisivumele ukuba sibonise i-jewel yethu ngokukhawuleza. Ewe ngokunjalo, uzame ukulandela imiyalelo enikezwe yingcali Oko ndiyenzile kuwe kuba ngoku siqala ngezethu
1 Ndingenza ntoni ukubulala iintsholongwane kwindawo ogqobayo kuyo
2 Ungakuphilisa njani ukugqobhoza inkaba
3 Ungaxela njani ukuba ukugqobhoza inkaba kusulelekile
Ndingenza ntoni ukubulala iintsholongwane kwindawo ogqobayo kuyo
Sele sihambile ukuba ukugqobhoza inkaba kunokuba nzima ngakumbi ukugcina usulelo lusimahla. Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba yindawo apho ukungcola kuqokelela khona ngokuqhwanyaza kweliso. Ke kufuneka sinikele ingqalelo kuyo kwaye siza kuyiphinda le nkqubo amaxesha ngamaxesha ngosuku.
Ukuba uza kuchukumisa inxeba, kufuneka sihlambe kakuhle ngesepha namanzi. Kodwa le ayinaziqholo kodwa kungcono ukhethe ukungathathi cala.
Kwindawo ekuthethwa ngayo, ikwayimfuneko yihlambe ngamanzi amancinci kunye nesepha epholileyo. Nangona i-saline yokomzimba ikwabonakalisiwe. Kufuneka siyitshize ngayo, sijonge ukuba imanzisa kakuhle na loo mngxuma.
Xa kuziwa ekucoceni, Ungasa ukugqobhoza kodwa ngononophelo olukhulu kwaye ukuyinyusa okanye ukuyithoba, akukho kungqamana phakathi. Iintsuku zokuqala kufuneka siqiniseke ngayo kuba kulapho sizidinga kakhulu.
Xa sele sicocekile, kufuneka siyomisa indawo kodwa asizukusebenzisa iitawuli okanye nantoni na efanayo. Kodwa kungcono i-gauze kunye nokunika izinto ezincinci ezithambileyo, ukunqanda ukurhuqa, kuba kunokusiphazamisa.
Ungakuphilisa njani ukugqobhoza inkaba
Ukongeza kula manyathelo sithethe ngawo, kuhlala kukho enye into ekufuneka siyikhumbule kuba ibalulekile. Ke, ukuba uyazibuza ukuba ungaphilisa njani ukugqobhoza inkaba, kuya kufuneka wazi konke oku kulandelayo:
Emva kokuyihlamba nokuyicoca, kufanelekile ukufaka iyeza lokubulala iintsholongwane, Ukuthintela usulelo olunokuthi luvele. Kodwa ungaze usebenzise utywala enxebeni.
Ngentonga ezindlebeni kwaye ifumile emanzini afudumeleyo, ungaluthambisa ukhakhayi oluvela ngamanye amaxesha. Endaweni yokubatsala kwaye basenze isilonda esikhulu, kuhlala kungcono ukulandela eli nyathelo ukubasusa ngokulula.
Sukususa ukugqobhoza. Kuya kufuneka uyihambise njengoko sibonisile, kodwa uhlale uyishiya endaweni yayo ngaphandle kokuba ugqirha ucebisa ngenye indlela.
Sithetha ngenxeba elihlala lithatha ixesha ukuphola. Ke kuya kufuneka ulinde iiveki ezimbini okanye ezintathu ngaphambi kokuba uye echibini kwaye ukuba uyahamba, kungcono ukuyigubungela kangangoko kunokwenzeka, ukuyigcina ikukude kangangoko kunokwenzeka kwi-chlorine.
Musa ukunxiba iimpahla ezixineneyo kule ndawo., ezinokuhlikihla kwi-jewel okanye inokubanjwa. Ngenxa yokuba iijezi azilunganga ngexesha lokuphilisa.
Ungaxela njani ukuba ukugqobhoza inkaba kusulelekile
Kuyinyani ukuba ayinguye wonke umntu oya kufumana impendulo efanayo. Kodwa ewe, xa sithetha ngosulelo ekugqobeni, sicacile ukuba kukho uthotho lweempawu esingafanele sizikhathalele.
Inkaba iya kuba bomvu kunesiqhelo. Nangona kuyinyani ukuba iintsuku zokuqala kunokuba kwaye ngaphandle kosulelo.
Uya kuqaphela ubushushu ngakumbi kuloo ndawo Kwaye uya kubona ukudumba.
Kwakhona, xa uyichukumisa kuya kuba buhlungu kwaye ubofu buya kuqala ukwenza inkangeleko.
Kwiimeko esele zigqithile, inokunika umkhuhlane omncinci, kodwa ngokuqinisekileyo ayiqhelekanga. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ubonane nogqirha wakho.
Ngawo onke amaxesha kufuneka ube nomonde omncinci, kuba inxeba kwaye kungathatha iiveki okanye iinyanga ezininzi ukuphola ngokupheleleyo. Ngoku uyazi indlela yokubulala iintsholongwane ekubhobozeni inkaba!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Ungayibulala njani intsholongwane ukugqobhoza inkaba